Sirta geedka “1,000 sano iyo kabadan noolaada” oo la helay | Hangool News
Sirta geedka “1,000 sano iyo kabadan noolaada” oo la helay
January 15, 2020 - Written by Hangool News 1
Seynisyahano ayaa ogaaday sirta keenta in geedka loo garanayo ginkgo uu noolaado in ka badan 1,000 sano.
Cilmi-baris lagu sameeyay geedkaas ayaa lagu ogaaday in uu adeegsado kiimiko difaac u ah oo ka ilaalisa cudurada iyo abaaraha.
Si ka duwan geedaha kale, hiddo-sidayaasha geedkan uma sameysna in ay noqdaan kuwo si fudud hoos ugu dhaca marka uu geedka duqoobo.
Geedka ginkgo wuxuu ka baxaa jardiinnada iyo beeraha dadweynaha ay ku nastaan ee daafaha caalamka oo dhan, balse wuxuu hadda qarka u saaran yahay in dunida uu ka dhammaado.
“Xaqiiqdii sirta waxay tahay in uu adagyahay hannaanka difaaca caafimaadka iyo inuu yahay geed aan lahayn wax lagu sii saadaalin karo in uu duqoobay,” ayuu yiri Richard Dixon oo ka tirsan Jaamacadda North Texas, Denton.
“Marka laga hadlo da’da geedka ginkgo, waxaa ka muuqata in marna aan laga dareemin inuu daciifayo oo uusan iska caabin karin caabuqyada weerarka ah.”
Image captionWaa geedo ginkgo ah oo ku yaalla caasimadda Shiinaha ee Beijing
Ginkgo biloba (geedka Maidenhair)
Cilmi-baarayaasha Mareykanka iyo Shiinaha waxay baareen geedo ginkgo ah oo 15 illaa 667 sano ay da’dooda u dhexeyso. Waxay taxliilin iyo baarid ku sameeyeen unugyada iyo qolfoofta kore, caleenta iyo miraha.
Waxay heleen in kuwa yaryar iyo kuwa waynba ay soo saarayaan kiimiko ay isaga difaacayaan cudurada iyo abaarta.
Waxaa ka mid ah, iska difaacidda sunta iyo jeermiska, waxayn sidoo kale leeyihiin hoormoono geedahan ka ilaaliya abaarta iyo dhibaatooyiinka kale ee deegaanka.
Baaritaanka hiddo-sadaha waxaa ka muuqdo in hiddaha la xiriira da’da aysan jirin xilli uu isbedelo, si la mid ah geedaha kale, gaar ahaan cowska iyo ubaxa.
Image captionGeedka Ginkgo wuxuu ka baxaa jardiinnada
Dr Dixon waxay la tahay in geedaha kale ee qarniyada noolaada ay la mid yihiin ginkgo. Waxaa ka mid ah geedka alwaaxa guduudan laga sameeyo, kaas oo soo saara kiimiko difaac adag u ah.
“Waxaan filayaa in cilmi-baaristan ay dhiirageliso dad kale, si ay u baaraan waxa u muuqda calaamadaha muhiimka ah ee nolosha dheer ee ginkgo iyo geedaha kale ee cumriga dheer,” ayuu yiri.
Isagoo ka hadlayay cilmi baaristan, Mark Gush, oo ah madaxa seynistan bay’ada iyo dhaqanka dhrta ee RHS, wuxuu sheegay in geedka ugu cumriga dheer dunida – oo ah geed barde ah (Pinus longaeva) – in lagu qiyaaso inuu jiray in ka badan 4,800 oo sano.
Cilmi-baaristan waxaa lagu daabacay joornaalka PNAS.